"Ịhụnanya" abụghị ịrịba ama na ọ bụ ihe ziri ezi | Apg29
887 online! | Sidvisningar idag: 47 795 | Igår: 216 459 |
"Ịhụnanya" abụghị ịrịba ama na ọ bụ ihe ziri ezi
Ịbụ "na ịhụnanya" na onye bụ ihe ịrịba ama na ọ bụ ihe ziri ezi.
Dị ka a nwaanyị na ị nwere ike ịda na ịhụnanya na onye bụ di, na anyị maara na Bible bụ ihe ọjọọ. N'otu aka ahụ, ọ bụ ihe ọjọọ banyere otu nwoke na nwanyị ọdịda na ịhụnanya.
Ị gaghị na-site mmetụta gị.
Ski kpakpando Anja Paerson gwara taa redio si okpomọkụ omume banyere otú ọ dara na ịhụnanya na nwaanyị ọzọ (Filippa). Ma ịbụ "na ịhụnanya. Ọ bụghị njirimara na ọ ga-abụ nri.
Ebe a, m kweere na ọtụtụ na-aga na-ezighị ezi. Ha na-achịkwa mmetụta ha na-eche na ọ bụ ihe ziri ezi. Ị na-agaghị abụ ohu gị obi. Ọ bụ gị kwesịrị ịchịkwa mmetụta gị.
Ịhụnanya - ezi ịhụnanya bụ kpamkpam dị iche iche ogige karịa mmetụta.
Ndị mmadụ taa mkpa Jizọs karịa mgbe ọ bụla. Ha nwere Jesus, mgbe ahụ, ha bụ ndị ziri ezi ná ndụ na-adịghị ndụ na-efu.
Site Tage Bergman
Tage Bergman ịkọrọ na-akpali echiche banyere dị iche iche ubi ugboro na anyị na-ahụ na Bible. Ndị a owuwe ihe ubi oge na-ekwu okwu n'otu oge mgbe anyị pụrụ ịtụ anya na owuwe nke Assembly na-ewe ebe.
Mgbe a ga-owuwe? Ọ ga-tupu ma ọ bụ mgbe mkpagbu? E nwere ọtụtụ echiche banyere ya, na echiche dị iche na ọtụtụ ebe. Anyị laghachi ugboro ugboro iji akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị o yiri ka ọtụtụ siri ike nghọta. Kama, anyị nwere ike na-ele ndị ọgaranya imagery nke Bible na isiokwu, nke na-enye a doro anya azịza. Anyị na-adịghị aghọta ihe ndị bụ isi nke okwu amụma mgbe anyị apụghị ịghọta ihe siri ike ịkọwa onodu.
The nwoke nwere mmasị nwoke mbụ SVT profaịlụ Pekka Heino atụmatụ maka na-aga n'ihu akwụkwọ gbochiri gbanyere mkpọrọgwụ n'obi ụka hey na Kungsholmen na Stockholm.
The owuwe, àmà na-egosi na oké mkpagbu ahụ bụ mfe nghọta ma ọ bụrụ na i kwere na Bible
Ndị nwere mgbe niile aga megide nke a, ị nwere ike ime ya n'ebe ọ bụla ọzọ, ma ọ bụghị ebe a na Apg29. M na-anabata mba nke Atumatu na bụghị yiri ndị ozizi nduhie nke Apg29!
Propaganda ụwa schematic friendly ọchịchị Sweden
Reader Mail site AJ
Nke a bụ na-akpali, ugbu a na-agba ndị Metro akwụkwọ akụkọ na ozi (n'ihu page, plus full mgbasa) ka a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkà mmụta sayensị na-ekwu na Annie Lööf nwere ike nweta ọzọ na-anwa na-etolite a ọchịchị ma na-Prime Minister nke Sweden.
The kasị ibu n'ụwa Christian telivishọn ụlọ ọrụ invests na Nordic TBN na Stockaryd
Site Saturday, July 7, 2018 ugbu a na-egosi na Media House Friends, nke malitere TV2020 nke ahụ ghọrọ Lifely Channel, n'okpuru ika TBN Nordic.
Fast ugboro maka igbu ọchụ nke Swedish clinics
Ọ bụrụ na m na-aghọta ya n'ụzọ ziri ezi, ọ bụ igbu ọchụ ma ọ bụrụ na ị na-egbu onye na-emeghị atụmatụ, mgbe igbu ọchụ na-zubere. Ebe ọ bụ na atụmatụ ime, ọ bụ ihe ọ bụla ma na igbu ọchụ!
Elida gaa Israel
Swedish Elida, ịdị n'otu ụgbọ mmiri maka Christian dum na naanị ọchịchị onye kwuo uche na Middle East, bịarutere ka Israel.
Turkey na-etinye ọtụtụ narị nde na-ewu alakụba n'ụwa nile
The Turkish ọchịchị na-okodu ọtụtụ narị nde iwu alakụba na a ogologo oge mgbaru ọsọ nke na-agbasa Islam n'ụwa nile.
Hijab maka ụmụaka na-ere
The British ngalaba ụlọ ahịa yinye Marks & Spencer ahịa a barnhijab adabara 6-8 afọ nọ n'agbata.
Mgbe ikpe hell?
N'ebe ọ bụla a mụrụ m, ya mere, nọ na-enyefe nzọpụta m nyere m. M na-adịghị zoputara n'ihi na a mụrụ m na a "Christian obodo", ma n'ihi na Jizọs chọrọ m!
Ọ dịghị onye nwere ike ghọgbuo Jesus
Hello anyụike! Ebe ọ bụ na mgbe ọ duhie Jesus?
The owuwe - gọzie olileanya!
"The owuwe bụ mgbanwe nke bi kwere ekwe ahụmahụ mgbe Jehova hapụ na-kwere ekwe heaven. Ndị mmadụ ga-enweta mgbe ahụ ka ha gbanwee, na-enweghị-enwe ọnwụ. "
Gịnị ka i kwesịrị ime na-efu na mgbe ebighị ebi hell?
Abụ, mindfulness na yoga bụ Eastern okpukpe
Na ọtụtụ magazin, na ọbụna akwụkwọ akụkọ, na-enyocha nkọwa akara eluigwe. Olee otú oké njọ na pịa ike ebipụta ihe ọ bụla dị ka enyo nwere ike na--ajụjụ.
On December 10, na-ede na otu mba nke United Nations n'okpuru free mbata na ọpụpụ
On December 10, e biri ebi a akwụkwọ maka UN nke ihu ọma na-emeghere ihe free mbata na ọpụpụ.
Ahụ-nwoke alụmdi na nwunye nwere ike-amachi Romania
Ahụ-nwoke alụmdi na nwunye nwere ike-amachi Romania. Nke a na izu ụka, na mba-votu ee ma ọ bụ ọ ịgbanwe oruru ka naanị alụmdi na nwunye ga-abụ a n'otu dị n'etiti nwoke na nwanyị.
Mmụọ Nsọ a na-ewepụ site n'ụwa na owuwe
Ikwu site LelFA
Banyere ụka banyere onye "nwere ike imeri." Ka anyị leba anya ná koinegrekiska isi ederede.
Gịnị bụ globalism
Globalism bụ nanị onye agha na akụkụ nile nke a mba njirimara ime, na EU bụ isi nzukọ - dịkarịa ala na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Juu Tel Aviv rọrọ nke owuwe
"M na nrọ na opì nāfù, na m na-agba ọsọ na n'ihu ọnụ ụzọ na anya. Ọtụtụ puku mmadụ si mba Israel na-haziri site na ígwé ojii na ha na-yi na-acha ọcha uwe mwụda ma elu-igwe gbawara na Angel Gabriel bụ n'elu-igwe n'elu ma na-afụ opi. "
The achọghị akụkụ iri na anọ
The-awụ akpata oyi akụkọ nke na-eto eto na obodo na a nkuchi ezinụlọ.
Ekele Malle Lindberg 89 afọ
Taa bụ kpara okwuchukwu Malle Lindberg 89 afọ! A mụrụ ya 290,929th Malle Ekele!
400 ndị e gburu site na ala ọma jijiji na mbufịt na Indonesia
Fọrọ nke nta 400 ndị e gburu site na ala ọma jijiji na ụdi mbufịt n'àgwàetiti Sulawesi na Indonesia. About dị ka ọtụtụ merụrụ ahụ na ọtụtụ na-efu.
Annie Lööf so na-ezo ya ezo Trilateral Commission
Today na-ekpughe Green Party Birger Schlaug na Malou Lindholm nke Center Party ndú Annie Lööf bụ onye so na nzuzo globalist J.Randall nzukọ, na Trilateral Commission.
Ga Annie Lööf praịm minista?
Ghọrọ Center Party ndú Annie Lööf kpọrọ Bilderberg nzukọ 2017 na ọ ga-adị Sweden esote onye isi ala?
8 afọ girl nwụrụ agbamakwụkwọ n'abalị
A Muslim 8 afọ girl nwụrụ na agbamakwụkwọ ha n'abalị Yemen!
The epupụta adawo - na a ga-a revival ugbu a?
Stefan Löfven bụ nke a ụtụtụ tozuru oke dị ka praịm minista. Gịnị na-eme ugbu a, na ihe na-eme na Sweden? Ndị mmadụ ga-ekpegara Chineke? Ga-enwe a revival?
The achọghị - Part Iri na atọ
Na nke a akụkụ m ga-agwa gị, ihe ndị ọzọ banyere awụ akpata oyi n'ahụ na dịghị mgbe m gwara ya ihe mere mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ihe niile bụ eziokwu, ma ụfọdụ aha ndị a gbanwere ma ọ bụ na-adịghị aha ya bụ.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 446 102 408 sidvisningar på Apg29!